Rafitra POS trano fisakafoanana | Waiterio trano fisakafoanana trano fisakafoanana
Rafitra POS trano fisakafoananaMpanamboatra tranokala fisakafoananaBlogDocumentationPricingDownloadsHiditraAndramo izao
Rafitra POS trano fisakafoananaMpanamboatra tranokala fisakafoanana
Ampitomboinao fahafaham-po ny trano fisakafoananareo
Waiterio dia manamboatra tsotra ny fitantanana ireo trano fisakafoanana sy fisakafoanana
Mitantana ny baikon'ny trano fisakafoanana amin'ny dingana 4 tsotra
Waiterio dia manambatra ny mpiasan'ny trano fisakafoanana amin'ny fifandraisana mahafinaritra
Ny waiter dia miditra ny baikon'ny mpanjifa ao amin'ny fampiharana Waiterio (hita amin'ny fitaovana rehetra).
Ny chef dia manomana ny baiko azo avy amin'ny mpanao pirinty mafanafana na seho an-dakozia.
Ny chef dia manamarika ny baiko ho vonona ary ny mpandroso dia mitondra izany eo amin'ny latabatry ny mpanjifa.
Ny mpanora-dalàna no manonta ny fandraisana sy manaiky ny fandoavam-bola amin'ny karama na karatra.
Azonao atao ny manafoana sy mamerina amin'ny laoniny ny famandrihana isaky ny maniry mivantana avy amin'ny fampiharana ianao. Hijanona ho voaro daholo ny angon-drakitrao rehetra.
Zahao ny vola miditra ary fantaro hoe iza amin'ireo vilia no manao tsara ary iza no tokony esorina amin'ny menio.
Asao ny mpiara-miasa aminao hampiasa an'i Waiterio ka zaraina at automatically ho anao ny baiko sy ny sakafo.
Izay misy mpanonta
Waiterio manohana ireo mpanao pirinty mafanafana rehetra. Ny ankamaroan'ny mpifaninana dia manohana marika tokana na roa hanery anao hividy hardware lafo vidy.
Afarao ny volavolan-dalàna
Waiterio dia manampy amin'ny fahazoana fandoavam-bola amin'ny mpanjifa mampiasa fomba fandoavam-bola samihafa.
Izay fitaovana rehetra
Azonao ampiasaina izany amin'ny takelaka, smartphone, tv, laptop ary solosaina desktop. Waiterio dia miasa amin'ireo rafi-pandaminana rehetra toa ny Android, iOS, Windows, macOS ary Linux.
Mpanjifa sambatra 305
Kaonty mavitrika 4125
Andramo maimaimpoana io rafi-pitantanana mavesatra io. Azonao atao ny mametraka didiny 100 isaky ny isam-bolana raha ampiasao maimaimpoana ity rindrambaiko ity. Azo alaina ho an'ny Android, iOS, Windows, macOS ary Linux ny fampiharana. Azonao atao ny mampiasa ity rafitra Point of Sale ity amin'ny tablety, smartphone, tv, laptop ary solosaina finday.
Tena haingana sy mivantana ny fametrahana sy fametrahana ny Waiterio POS ho an'ny trano fisakafoanana anao. Ny hany ilainao hanombohana dia adiresy mailaka ary fitaovana iray misy fifandraisana Internet.
Tiany ny mpanjifantsika
Ity fampiharana ity dia nanampy ny kafe kely keliko mihazakazaka sy mahomby.
Waiterio nanatsara ny fizotrako trano fisakafoanana. Sarobidy ho an'ny vola.
Tena mora atao ny manitsy ary tena mandray andraikitra. Na ny mpahandro ny sakafoko toa azy aza.
Andramo maimaim-poana ny fampiharana. Azonao atao ny mametraka fanafody 100 isaky ny isam-bolana raha maimaim-poana ny fampiharana. Azonao atao ny misoratra anarana amin'ireto drafitra manaraka ireto haka ny baiko bebe kokoa:
100 Filaharana isam-bolana
300 Filaharana isam-bolana
600 Filaharana isam-bolana
1000 Filaharana isam-bolana
1500 Filaharana isam-bolana
∞ Filaharana isam-bolana
Vakio ny sisa amin'ny fanontaniana
Entinapolitika fiarovana fiainan'olonaTerms & Conditions